कोभिड–१९ खोप र अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थ
विचार कोभिड–१९ खोप र अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थ जोसफ एस. ने
बाह्रखरी - बुधबार, जेठ १९, २०७८
एक शताब्दीअघि इन्फ्लुयन्जा भाइरसको महामारीबाट प्रथम विश्वयुद्धमा भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । अहिले, कोभिड–१९ को महामारीले सन् १९४५ देखि अहिलेसम्म जति अमेरिकी विभिन्न लडाइँमा मरे त्यसभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । सय वर्षअघि र अहिलेको फरक चाहिँ के हो भने त्यतिबेला इन्फ्लुयन्जाविरुद्ध कुनै खोप बनेको थिएन तर अहिले विभिन्न कंपनी र विभिन्न देशले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकास गरिसकेका छन् ।
अमेरिका, बेलायतजस्ता संसारका धनी लोकतान्त्रिक मुलुक युवा अवस्था पुगेको आफ्नो जनसंख्याको आधाभन्दा बढीलाई अहिलेको महामारीविरुद्ध खोप लगाउन सफल भइसकेका छन् । फलस्वरुप, रोगको संक्रमण र मृत्युको संख्यामा पनि निकै कमी आएको छ । भारत, ब्राजिल तथा धेरै अफ्रिकी मुलुकमा खोप लगाउने दर अत्यन्त न्यून रहेको कारणले मृत्यु दर अत्यधिक छ । द इकोनोमिस्ट पत्रिकाको अनुमानअनुसार यो महामारीबाट मृत्यु हुनेको संख्या करिब एक करोड पुग्ने अवस्था छ जुन सरकारी तवरले दिइने आधिकारिक तथ्यांकभन्दा तीन गुणा ज्यादा हुनेछ ।
यस्तो अत्यन्त नाजुक अवस्थामा के विकसित देशहरूले खोप (भ्याक्सिन) नपाएर अत्यन्त अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हैन ? आफ्नो देशमा सबैलाई खोप लगाएरमात्र अरुलाई दिने तरिका ठीक हो र ? जुनबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले “पहिला अमेरिका” भन्ने नारा लगाएका थिए त्यस समयमा उनी लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार धेरै गलत थिएनन् । किनभने निर्वाचित नेताको पहिलो दायित्व नै आफ्ना जनताको हक, हितको सुरक्षा र तिनको सम्बर्धनका लागि काम गर्नु हुन्छ । तर, मेरो पुस्तक “डु मोरल्स म्याटर?” (के नैतिकताको मूल्य हुन्छ ?) को मूल प्रश्न नै नेताहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी परिभाषित गर्छन् भन्ने नै हो । यसरी राष्ट्रिय स्वार्थको परिभाषा गर्ने दुई प्रकारका दृष्टि हुन्छन्, एउटा हुन्छ राष्ट्रपति ट्रम्पको जस्तो अदूरदर्शी र लेनदेनकारी तर अर्को दृष्टि निकै फराकिलो र धेरै कालसम्म प्रभाव पुर्‍याउने प्रकारको हुन्छ ।
उदाहरणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रयुमनको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ‘मार्सल प्लान‘को सोच । युरोपेली सहयोगी राष्ट्रलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा खर्च भएको पैसा तिर भनेर अमेरिकाले भनेन । अमेरिकाले पहिलो विश्वयुद्धपश्चात खर्च तिराउने नीति अपनाएकोे थियो । बरु, ट्रयुमनले अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत युरोपेली राष्ट्रको उत्थानका लागि खर्च गर्ने निर्णय गर्यो । यस नीतिले युरोपेलीहरूले पुनःनिर्माणमा अमेरिकी साझेदारीको उपयोग गरे जुन उनीहरूलाई निकै लाभदायक भयो । साथै अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थ पनि सफलीभूत भयो । किनभने ती देशमा पूर्वी युरोपको जस्तो कम्युनिस्ट प्रभाव परेन ।
मार्सल प्लानजस्तो नीति वा प्रयत्न गरिब देशमा खोप लगाउने विषयमा पनि अवलम्बन गरिनुपर्छ । कालान्तरमा यो अमेरिकी राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनजान्छ । यसका लागि चार कारण दिन सकिन्छ । पहिलो, यो अमेरिकाको आफ्नै चिकित्सकीय स्वार्थका लागि गर्नुपर्छ । भाइरसले मानव जातिविरुद्ध आक्रमण गर्दा राष्ट्रियता हेर्दैन । भाइरसलाई आफ्नो वृद्धिका लागि शरीर चाहिन्छ र त्यसका लागि खोप नलगाएका गरिब देशका धेरै जनताको शरीर उपलब्ध हुन्छ । भाइरसले यसरी वृद्धि हुने मौका पायो भने बिस्तारै रुप फेर्दै अहिलेका खोपले नछुने भेरियन्ट बन्न सक्छ जुन अमेरिका पुग्न केही समय लाग्दैन । यस्तो भएको खण्डमा नयाँ खोप विकास गर्नुप¥यो, फेरि जनतालाई लगाउनु पर्‍यो, जसले चिकित्सा प्रणालीमा ठूलो तनाव पैदा गर्नसक्छ । त्यतिमात्र होइन फेरि लकडाउन र आर्थिक क्षति पनि प्रशस्त हुन्छ ।
भ्याक्सिन मार्सल प्लान हाम्रो विचारमा अमेरिकाको राष्ट्रिय हितमा नै हुन्छ । कतिपय विदेश नीति विज्ञहरू नैतिक मूल्य र स्वार्थ वा सरोकारलाई एक अर्काको विपरीत मान्छन् । तर, त्यो गलत अन्तरविरोध हो । हाम्रा मूल्यहरू सधँै हाम्रा महत्त्वपूर्ण हितसँग आबद्ध रहेका हुन्छन् । किनभने तिनले हामी मानवीयरुपमा कस्ता छौँ भनेर देखाइरहेका हुन्छन् । अन्य मानिसजस्तै अमेरिकीहरूले पनि आफ्ना देशवासीको हितमा बढी ध्यान दिन्छन् तर त्यसको मतलब अरुको समस्याप्रति उनीहरू उदासीन छन् भन्ने होइन । कुनै डुब्न लागेको मानिसले मद्दत माग्दै करायो भने उसले विदेशी भाषामा बोलेको कारणले बेवास्ता गर्ने भन्ने त हुँदैन नि । लोकतन्त्रमा नेताहरू जनताको विचारका आधारमा कतिपय अवस्थामा डोरिएका हुन्छन् र नीति बनाउँदा धेरै पर जान पाउँदैनन् भने जनताको विचार परिवर्तन गर्न पर्याप्त स्रोत र साधन पनि पाउँदैनन् ।
तेस्रो राष्ट्रिय स्वार्थ नरम शक्ति (सफ्ट पावर) हो जुन दोस्रो कारणसँग निकट छ । उदाहरणका लागि मार्सल प्लान वास्तविक आर्थिक स्रोत र रकम दिने विषयसँग जोडिएको थियो । तर, यससँगै दयालुपन र दूरदृष्टि पनि जोडिएको थियो जसले युरोपेलीको मन जित्नसक्यो । नर्वेका राजनीतिशास्त्री गेर लुन्डेस्ट्याड तर्क गर्छन् – विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको युरोपमा साम्राज्यवादीजस्तै भूमिका थियो तर त्यस्तो साम्राज्यवाद जसलाई निमन्त्रणा दिएर बोलाइएको होस् । त्यस्तै गरिब देशलाई खोप प्रदान गरेर तथा तिनको चिकित्सा क्षेत्रलाई बलियो बनाएको खण्डमा अमेरिकाको नरम शक्ति धेरै बढ्नेमा शंका छैन ।
अन्त्यमा, यहाँ भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको छ । चीनले धेरै चाँडो के बुझ्यो भने कोभिड–१९ वुहानमा उत्पत्ति भएको कारणले उसको नरम शक्ति केही कमजोर भयो । सुरुमा भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा कुनै कुरा स्पष्ट थिएन र सुरुको अवस्थामा चीनको नियन्त्रण नीति र सत्य स्वीकार नगर्ने कारणले समस्या चाहिनेभन्दा बढी गहिरिएर गयो । अनि उसको अधिनायकवादी ‘लकडाउन‘ सफल भयो । त्यसपछि संसारका धेरै देशमा चीनले कोभिड–१९ कूटनीतिमा निकै मेहनत गरेको छ ।
अरु देशलाई चिकित्सा सामग्री र खोप अनुदान दिएर चीनले विश्वभरमै सुरुको गल्ती गर्ने देश भन्ने सोच बदलेर सहयोगी मुलुकको रुपमा आकर्षण पैदा गरेको छ । बाइडेनको सरकार यस खेलमा चीनलाई भेट्टाउन पछि लागेको छ । अमेरिकाले ६ करोड एस्ट्रा जेनेका र २ करोड थप फाइजर, मोडर्ना तथा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप खुला गर्ने भनेको छ । यसका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई चार अर्ब डलर सहयोग गरेर गरिब देशका लागि खोप उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ । साथै भ्याक्सिन उत्पादन गर्न केही समय बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा छुट दिने पनि अमेरिकाले घोषणा गरेको छ ।
छोटकरीमा, अमेरिकाको इतिहास, मूल्य र मान्यता, राष्ट्रिय हितजस्ता विषय सम्बद्ध चार सशक्त कारणले गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाले धनी देशको समूहको नेतृत्व गर्दै संसारका अन्य देशलाई खोप दिलाउनु पर्छ । र, यो काम आफ्नो घरभित्र खोप लगाइसक्नुभन्दा अघि नै गरिनुपर्छ ।
(हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक)
बुधबार, जेठ १९, २०७८ मा प्रकाशित
#जोसफ एस. ने